Akụkọ - Nguzogide ọgwụ ogwu
Nguzogide ahihia na-ezo aka ikike nke biotype nke ahịhịa iji lanarị ngwa ngwa ahịhịa ọgwụ nke ndị mbụ nwere ike ibute. A biotype bụ otu ahịhịa dị n'ime otu ụdị nwere ihe okike (dịka iguzogide otu ahịhịa ọgwụ) abụghị nke ndị mmadụ niile.
Nguzogide ahihia ahihia nwere ike buru oke nsogbu chere ndi oru North Carolina. N’ụwa nile, ihe karịrị ahịhịa 100 nke ahịhịa amata na-eguzogide ọgwụ otu ma ọ bụ nke a na-ejikarị ahịhịa. Na North Carolina, anyị nwere biotype nke goosegrass na-eguzogide ọgwụ ahịhịa nke dinitroaniline (Prowl, Sonalan, na Treflan), ụdị nke cocklebur na-eguzogide MSMA na DSMA, na ụdị nke ryegrass kwa afọ na-eguzogide Hoelon.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, enwere obere nchegbu banyere mmepe nke nguzogide ọgwụ na North Carolina. Ọ bụ ezie na anyị nwere ụdị atọ nwere biotypes na-eguzogide ọgwụ ụfọdụ, ahịhịa nke biotypes a kọwara n'ụzọ dị mfe site na-eto eto na monoculture. Ndị na-eto eto na-agbanwe ihe ọkụkụ enwechaghị mkpa ichegbu onwe ha banyere nguzogide. Otú ọ dị, ọnọdụ ahụ agbanweela n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi mmepe na ojiji zuru ebe niile nke ahịhịa ndụ nwere otu usoro ọrụ (Tebụl 15 na 16). Usoro nke ime ihe na-ezo aka na usoro akọwapụtara site na nke ahịhịa ahịhịa na-egbu osisi dị nro. Taa, ahihia ahihia nwere otu usoro ihe a nwere ike iji mee ihe n'ọtụtụ ihe ọkụkụ nwere ike itolite na ntụgharị. Ihe kachasị mkpa bụ ahịhịa ahihia nke na-egbochi usoro enzyme ALS (Table 15). Ọtụtụ ọgwụ osisi anyị na-ejikarị eme ihe bụ ndị na-emechi ALS. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ọgwụ ahịhịa ọhụrụ a tụrụ anya na ha ga-edebanye aha n'ime afọ 5 sochirinụ bụ ndị na-emechi ALS. Dịka otu, ndị na-emechi ALS nwere ọtụtụ njirimara ndị yiri ka ọ na-eme ka ha nwee ike ịmalite mmepe nke ihe ọkụkụ.
A na-eji ahihia ahịhịa eme ihe n'ihe ubi n'ihi na ha na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ nwee akụ na ụba karịa ụzọ ndị ọzọ nke igbo igbo. Ọ bụrụ na iguzogide otu ahịhịa ọgwụ ma ọ bụ ezinụlọ nke ahịhịa ahihia na-agbanwe, ahịhịa ọgwụ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị agaghị adị. Dịka ọmụmaatụ, ugbu a enweghị ọgwụ ahịhịa ọzọ iji chịkwaa ryegrass na-eguzogide Hoelon. N'ihi ya, a ga-ele ahịhịa ahịhịa anya dị ka akụrụngwa echekwara. Anyị ga-eji ahịhịa ahihia n'ụzọ na-egbochi mmepe nke iguzogide.
Nghọta nke otu esi eguzogide na-agbanwe dị mkpa iji ghọta otu esi egbochi nguzogide. Enwere ihe abụọ dị mkpa maka nhịahụ na-eguzogide ọgwụ ahihia. Nke mbu, ahihia mmadu nke nwere ihe okike nke na-enye nsogbu ga-adi na ndi ala. Nke abụọ, nrụgide nhọrọ sitere na ojiji nke ahịhịa ọgwụ nke ndị a na-adịghị ahụkebe na-eguzogide ọgwụ ga-emetụta ndị mmadụ. Ndị na-eguzogide ọgwụ, ọ bụrụ na ha nọ ugbu a, ọ bụ pasent ole na ole nke ọnụ ọgụgụ mmadụ dum. Dị ka ọ na-adịkarị, ndị na-eguzogide ọgwụ na-anọkarị na redio sitere na 1 n’ime 100,000 ruo 1 n’ime 100 nde. Ọ bụrụ na ejiri ọgwụ ahịhịa ahụ ma ọ bụ ahịhịa ya na otu usoro ihe a na-aga n'ihu, a na-egbu ndị nwere ike ịnwụ mana ndị na-eguzogide ọgwụ adịghị emerụ ahụ ma mepụta mkpụrụ. Ọ bụrụ na nrụgide nhọrọ na-aga n'ihu ruo ọtụtụ ọgbọ, biotype na-eguzogide ọgwụ ga-emecha mejupụta ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị bi na ya. N'oge ahụ, enweghị ike ịnweta njikwa ahịhịa na-anabata ya na ahịhịa ndụ ma ọ bụ ahịhịa.
Otu ihe dị mkpa nke usoro njikwa iji zere mgbanwe nke nguzogide ọgwụ ahịhịa bụ ntụgharị nke ahịhịa ahịhịa nwere usoro dị iche iche. Ejila ahihia ahihia na oke ihe egwu di na nkpuru abuo. N'otu aka ahụ, emela ihe karịrị ngwa abụọ nke ahịhịa ọgwụ ndị a dị oke egwu n'otu mkpụrụ. Ejila ahịhịa ọgwụ na-ebugharị ihe na-agafe agafe karịa ihe ọkụkụ abụọ. Ekwesịrị ịhọrọ ahịhịa dị na ngalaba nwere obere nsogbu mgbe ha ga-achịkwa ihe mgbagwoju anyaTank mixes ma ọ bụ ngwa ngwa nke ahịhịa ahịhịa ahịhịa nwere usoro dị iche iche a na-arụkarị ka a na-akpọ dịka akụkụ nke usoro njikwa njikwa. Ọ bụrụ na ejiri akụrụngwa nke ngwakọta tankị ma ọ bụ ngwa ndị a na-agbaso n'ụzọ amamihe wee họrọ, atụmatụ a ga-enye aka dị ukwuu na-egbu oge mmalite mgbanwe. O di nwute, otutu ihe a choro nke ntaneti ma obu ihe ndi ozo n'ile iji zere iguzogide adighi enweta ihe ndi ozo. Iji bụrụ nke kachasị dị irè na igbochi ngbanwe nke nguzogide, ahịhịa ahịhịa eji eme ihe n'otu n'otu ma ọ bụ na ngwakọta mmiri kwesịrị ịnwe ụdị njikwa ahụ kwesịrị inwe ụdị nkwụsi ike ahụ.
Ruo n'ókè o kwere mee, jikọọ usoro ndị na-abụghị kemịkalụ dịka ịkọ ihe n'ime usoro igbo ahihia. Nọgide na-enwe ezigbo ihe ndekọ banyere iji ahịhịa na-eme ihe n'ọhịa ọ bụla maka ntụgharị n'ọdịnihu.
Etechọpụta ahịhịa na-eguzogide ọgwụ. Imirikiti ọdịda nke ahịhịa na-esiteghị na mgbochi ọgwụ. Tupu i were na ahịhịa ndị dị ndụ na ngwa ahịhịa na-eguzogide ọgwụ, kpochapụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime na njikwa adịghị mma. Ihe ndi nwere ike ime ka ahihia ghara igbochi gunyere ihe dika ime ihe ojoo (dika onu ogugu, mkpuchi na-ezighi ezi, mmekorita nke oma, ma obu enweghi onye ozo); ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma maka ezigbo ọrụ ahịhịa; oge na-ezighi ezi nke ngwa ahịhịa ahịhịa (ọkachasị, itinye akwụkwọ ahịhịa ọgwụ ahịhịa mgbe ahịhịa buru oke ibu maka njikwa dị mma); na ahịhịa na-apụta mgbe etinyere ahịhịa ahịhịa dị mkpụmkpụ.
Ozugbo e kpochapụrụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ọ ghara ịchịkwa nchịkwa, ihe ndị na-esonụ nwere ike igosipụta ụdị biotype na-eguzogide ọgwụ: (2) ahịhịa dị mma nke ụdị a na-akọ na-etinye ọnụ n'etiti osisi nke otu ụdị ahụ e gburu; (3) ụdị ndị anaghị achịkwa na-adịkarị mfe ịnweta ahịhịa a na-ekwu okwu ya; na (4) ubi nwere akuko banyere ojiji eji ogwu ahihia nke a na-ekwu maka ya ma obu ogwu ahihia ya na otu usoro ihe. Ọ bụrụ na a na-enyo enyo na-eguzogide, kwụsị ozugbo iji ọgwụ ahịhịa dị na ya na ahịhịa ndị ọzọ nwere otu usoro ọrụ ahụ.